Suuqa: Neymar, Rooney, Wenger, Umtiti, Martial, Allegri iyo Wararkii ugu waaweynaa Suuqa kala iibsiga
Wednesday, January 23rd, 2019 - 20:45:35
Wednesday May 09, 2018 - 13:54:31 in Wararka by
Suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa furmi doona maalmo kadib iyada oo si Rasmi ah loo furi doono dhamaadka horyaalada ugu waaweyn yurub oo ku jira marxaladihii ugu dambeeyay.
Suuqa xagaaga oo noqon doona mid si weyn lacago loo kharash garayn doono ayaa furmi doona wakhti dambe oo bishan aynu ku jirno ee May.
Koox walba ayaa u diyaar garoobi doonta sidii ay kooxdeeda u xoojin lahayd waliba gacanta ugu soo dhigi lahayd xiddigaha ay u baahan yihiin.
Weeraryahanka kooxda Everton ee Wayne Rooney oo 32 jir ah ayaa wadahadalo kula jira kooxda reer America ee DC United isaga oo doonaya in uu u wareego xagaaga(Washington Post).
Kooxda Man United ayaa diyaar u ah in ay Xiddiga Anthony Martial ku darto heshiiska 19 jirka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Borussia Dortmud ee Christian Pulisic(Mirror).
Kooxda Barcelona ayaa doonaysa in ay heshiis cusub ka saxiixato xiddiga daafaca uga ciyaara ee Samuel Umtiti kaas oo heshiiskiisa lagu bur-burin karo 52 milyan oo euro xilli ay Man United aad u doonayso saxiixiisa(Sun).
Tababaraha Kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa sheegay in uu kooxdiisa Juventus la fariisan doono wadahadalana la qaadan doono dhamaadka xilli ciyaareedkan xilli lala xiriirinayo Arsenal(Express).
Tababaraha Arsenal ee Arsene Wenger oo ka tagi doona kooxda Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa sheegay in laga yaabo in uu door agaasime ka qaabto kooxda Paris St-Germain(Telegraph).
Xiddigaha kooxda Arsenal ayaa ka niyad jabsan dhaawacyada badan ee xiddiga Mesut Ozil xilli uu xidigu dhaawac ku seegay kulankii ugu dambeeyay Arsene Wenger ee Emirates(Mail).
Wakiilka xiddiga Yaya Toure ayaa sheegay in ciyaaryahanku uu balanqaaday inuu bixin doono kala bar mushaharkiisa haddii kooxdiisa cusub aysan ku qancin qaab ciyaareedkiisa xilli ciyaareedka soo aadan (Express).
Kooxda Man City ayaa dib u bilowday wadahadalada ay ku doonayso in ay kula saxiixato xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Leicester city Riyad Mahrez oo 27 jir ah kadib markii uu heshiisku bur-buray suqii Janaury(Times).
Kooxda Juventus ayaan wali wax dalab ah ka soo gudbin weeraryahanka kooxda chelsea ee Alvaro Morata oo 25 jir ah inkasta oo uu xiddigu heshiiska shaqsiga ah la gaaray kooxda reer Italy(Goal).
Madaxweynaha kooxda Atletico Madrid ee Enrique Cerezo ayaa sheegay in uu Weeraryahanka Antoine Griezmann oo 27 jir ah sii joogi doono kooxda xilli ciyaareedka dambe wax walba oo dhaca(AS).